Ma Tihiin Meel Loo Socda Bixitaan Mise Calaamad uun? | Martech Zone
Axad, Sebtembar 22, 2013 Axad, Sebtembar 22, 2013 Douglas Karr
Aragtida waxa suuqgeynta internetka waa in kala duwanaan karaan shirkad ilaa shirkad. Waxaan leenahay macaamiil aad ugu qanacsan in si fudud loo helo bog yar oo qoraal ah si ay u hubiyaan liiskooda suuq geynta inay leeyihiin goob qurux badan. Waa aragti nasiib darro ah, laakiin qaar baa wali la halgamaya fahamka dabeecadda is-dhexgalka ee websaydhka waxayna sii wadaan inay ku tiirsanaadaan isku daygooda iyo runtooda dhaqanka xeeladaha suuq geynta. Waxaan jeclaan lahaa inaan tuuro isbarbardhig aan in muddo ah ka fikirayay - oo dib noogu soo celinaya isbarbardhiga macluumaadka superhighway.
Istaraatijiyaddaada suuq-geynta internetka waxay noqon kartaa a calaamad, ah bixitaanka ama a caga rajooyinka iyo macaamiisha. Istaraatiijiyad kasta waxay leedahay kharashkeeda iyo faa'iidooyinkeeda. Calaamaddu waxay u baahan tahay ilaha ugu yar waxayna bixisaa jawaab yar. Bixitaanku wuxuu u baahan yahay wax badan. Meesha loo socdo wax badan. Sideed ku go'aansan kartaa waxa istiraatiijiyaddaadu tahay?
Si midab loogu siiyo tusaalahan, aan dhahno waxaan iibsanayaa oo rakibayaa Philips 55 ″ HDTV. Marka, waxaan sameeyaa xoogaa cilmi baaris ah oo ku saabsan badeecadaha iyo macluumaadka si aan u sameeyo iibsasho wanaagsan, oo aan barto sida loo dejiyo loona shaqeeyo.
Websaydhka Philips waa Sign. Ka fogow wax qiima ah ama macluumaad ah oo ku saabsan halka la iibsanayo, waxa qalab ee la isticmaalayo, ama fiidiyowyada ku saabsan sida loo isticmaalo alaabada - websaydhkani waa buug yar oo dhijitaal ah. In kasta oo ay tahay degel si qurux badan loo qaabeeyey, haddana wax hawl ah uun baa jira. Xaqiiqdii, kaliya 4 qof ayaa dib u eegay sheyga… iyadoo ay jiraan dib u eegisyo xun. Boggu dhab ahaantii wuu jabay, sidoo kale… isagoo sheegaya inay jiraan 0 dib u eegis markii ay dhab ahaantii jiraan 4.
Marka lagu daro qeexitaanka farsamo ee aad ka hesho Philips, Newegg wuxuu bixiyaa fursad aad ku iibsato, fiiriso alaabooyinka la midka ah, oo aad aragto dib u eegisyada (in kasta oo aysan jirin wax jira) Haddii qiimaha Newegg, dhoofinta iyo soo celinta siyaasaddu ay wanaagsan tahay - waa halka aad ka baxdo. Haddii kale, waxaad ku soo noqotaa wadada oo raadisaa meel kale si aad u hesho macluumaadka ama aad u sameyso iibsiga.
CNET: Meesha loo socdo
Hal fiiri natiijooyinka raadinta waxaadna u sheegi kartaa shirkada inteeda badan gelisay naftooda matoor raadinta. Gelitaanka CNET waxay leedahay googoyn hodan ah oo dib u eegis iyo qiimeyn ah, iyo sidoo kale qoraa awood u leh:
Bogga dib u eegista waa mid qoto dheer oo cajiib ah… oo leh dib u eegista CNET, dib u eegista isticmaaleyaasha, faallooyinka isticmaalaha, awoodda raacitaanka isbeddelada bogga, fiidiyoow, tilmaamaha isticmaalka, isdhexgalka bulshada ee qoto dheer (isdhexgal badan), tan sawirro ah oo ay ku jiraan nidaamka menu-ka, dhowr ikhtiyaar oo ku saabsan halka laga iibsanayo, qiimaha hadda jira, dulucda dib-u-eegista, isbarbardhigga noocyada kale, noocyada farsamada (oo si fiican uga baxsan goobta Philips!) Marka lagu daro dib-u-eegista faahfaahsan ee qoraa magac leh oo leh sawir iyo taariikh nololeed .
In kasta oo aadan dhab ahaan wax ku iibsan karin CNET, kani waa goobta loo socdo. Dadku way ka soo boodi karaan boggan si ay u gujiyaan badhanka iibsiga ee Amazon ama meel kale, laakiin tani waxay ahayd meeshii ay ka heleen macluumaadka ay u baahnaayeen iyo halka ay ku laaban doonaan waqtiga soo socda.
Iibsashada ugu Fiican: Fashil
Best Buy wax dan ah kama lihin inaad alaabta iibsatay iyo inkale… waxay kaliya yihiin iibka cusub kadib. Marka - iska iloobo xaqiiqda inaan haysto Kaarka Abaalmarinta Iibsiga Ugu Fiican iyo inaan rabo inaan ka helo macluumaad dheeraad ah iibsashada aan ka sameeyay dukaankaaga. Maraq maleh adiga.
Philips wuxuu dhisi karaa bog la yaab leh - oo leh fiidiyowyo, tilmaam, qalab, iyo dib u eegis madax-bannaan oo ay sameeyaan hoggaamiyeyaasha warshadaha. Ama waxay daaweyn karaan boggaga kale iyo dib u eegista bogga. Waxaa laga yaabaa in muuqaalka ugu xiisaha badan ee maqan uu yahay awoodda si fudud loogu arki karo qiimaha oo guji si aad wax uga iibsato meelaha alaabada lagu sito.
Haddii CNET faa'iido u yeelan karto adoo ku tiirsan xayeysiinta iyo dakhliga ku xiran, hubaal bogagga kore waxay kor u qaadi karaan boggaggooda si ay ula jaan qaadaan dhammaan astaamaha iyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah inay noqdaan goob loo socdo.
Sideed dib ugu dhisi laheyd bartaada si aad u hubiso inay tahay meesha loogu talagalay dadka soo booqda ee baaraya ama wax ka iibsanaya meheraddaada? Waxaan u maleynayaa in shirkado aad u tiro badani ay isu fiiriyaan sidii bixitaan waxayna u muuqdaan inay iswaafajinayaan ama ka adkaanayaan tartankooda iyagoo ah a ka fiican bixid Maxaa diidaya in loo socdo?
WPide: Faylka Faylka Tifatiraha Wanaagsan ee loogu talagalay WordPress